Blockchain समाचार 19.09.2018 - Blockchain समाचार
सेप्टेम्बर 19, 2018 व्यवस्थापक
निष्ठा सीईओ गुप्त उत्पादनहरु मा संकेत
निष्ठा निवेश सीईओ अबीगेलले जनसन कम्पनी cryptocurrency र blockchain-सम्बन्धित उत्पादन र प्रसाद को एक नम्बर मा काम गरिरहेको छ कि प्रकट गरेको छ, आफ्नो रिलीज tentatively वर्ष अघि कहिलेकाँही लागि तय. सीईओ "हामी भइ केही कुराहरू भयो भने, आंशिक गरेको छन् तर पनि प्रकारको को तखता मा यो साँच्चै सही समय किनभने केही कुराहरू. हामी वर्ष को अन्त द्वारा घोषणा गर्न केही कुराहरू गर्न आशा। "
निष्ठा लगातार बारम्बार छ कि केही ठूलो कम्पनीहरु को एक भएको छ र खुल्लमखुल्ला गुप्त यसको ब्याज signaled, र मा सीईओ निर्दिष्ट गर्न "गए हामी के त Bitcoin लागि प्रयोग अवस्थामा एक लामो सूची निर्माण भएको थियो सुरु, Ethereum, अन्य cryptocurrencies, वा संभावित बस कच्चा blockchain प्रविधि. तिनीहरूलाई को भन्दा अब या कम से कम तखता धारण गरेर scrapped गरिएको छ. वास्तवमा बाँचे कुराहरू म आवश्यक हामी आशा लाग्छ कुराहरू थिएनन्. हामी बजार सुन्न र अर्थमा के बनाउने पूर्वानुमान गर्दै थिए। "
बेलायत खजाना: “गुप्त-सम्पत्ति” विनियमन आवश्यक
Bitcoin र अन्य डिजिटल मुद्राहरू छन् एक “जंगली पश्चिम अवस्था” र लगानीकर्ताले रक्षा गर्न नियमन गर्न आवश्यक, सांसदहरु को एक समिति आग्रह गरेको छ. समस्या अस्थिर मूल्यहरु समावेश, न्यूनतम उपभोक्ता संरक्षण र ह्याकिङ र पैसा-शोधन को जोखिम, को खजाना समिति भन्छ. यो समिति कुनै राम्रो-कार्य cryptocurrencies थिए भने र तिनीहरूलाई कल गर्न उपयुक्त “गुप्त-सम्पत्ति”. यो शहर वाचडग आग्रह, वित्तीय आचार प्राधिकरण, तिनीहरूलाई निरीक्षण गर्न.
हाल, को विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ यी सम्पत्तिहरू को जारीकर्ता वा कारोबार गर्दै भएको आदानप्रदान या त ठीक गर्नु कुनै शक्ति छ. “हाल गुप्त-सम्पत्ति लगानीकर्ताले जोखिम को litany देखि धेरै सानो सुरक्षा afforded छन्. अर्थात्, उपभोक्ता redress लागि कुनै औपचारिक संयन्त्र छन्, न त क्षतिपूर्ति।” को खजाना समिति भने. Nicky मोर्गन, जो समिति कुर्सियों, भने: “सरकार र नियामकहरु सम्भावित लगानीकर्ताले गर्न कमजोर चेतावनी issuing साथ bumble लागि यो unsustainable छ, अहिलेसम्म अभिनय नगर्न. न्यूनतम मा, विनियमन उपभोक्ता संरक्षण र विरोधी-पैसा-शोधन सम्बोधन गर्नुपर्छ।”
Nasdaq गुप्त अनुकूल स्वीडिश fintech Cinnober प्राप्त छ
nasdaq, संसारको दोस्रो ठूलो शेयर बजार, शुक्रवार घोषणा Cinnober प्राप्त गर्न काम छ भनेर, स्वीडेन मा आधारित व्यापार समाधान प्रदायक. Cinnober डिजिटल सम्पत्ति तिर bullishness लागि इतिहास छ र यो सजिलो संस्थाहरू तिनीहरूलाई लगानी गर्न लागि बनाउने. ती प्रयासको एक BitGo संग साझेदारी छ, संस्थागत-ग्रेड cryptocurrency जिम्मा सुरक्षाको लागि एक Behemoth.
Nasdaq गरेको नवीनतम अधिग्रहण विशेषताहरू, यस मामला मा अप्रत्यक्ष हुनत, cryptocurrency व्यापार को लागि आफ्नो स्वाद. Cinnober, बेला एक विनिमय नै, marketplaces र clearinghouses गर्न एक व्यापारिक समाधान प्रदायक हो. उदाहरणका लागि, BitGo मंच Nasdaq मा ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताले लागि राम्रो-अनुकूल छ. BitGo संग बहु-हस्ताक्षर सुरक्षा र हेरचाह समाधान यो सबै भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक स्पेस मा बनाएको छ. Cinnober गरेको cryptocurrency Custodian सेवा अधिग्रहण सबैभन्दा coveted हतियार मध्ये एक हुन सक्छ, custodianship भन्दा चिन्ता धेरै संस्थागत लगानीकर्ताले आनाकानी गरेका छन् रूपमा.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 18.09.2018
$126एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
मारियो Draghi: Bitcoin regulati...
मारियो Draghi, president of the...
Bitcoin Satoshi Vision BSV - टी ...
समाचार आज Bitcoin! Nike Getti...
Twitter मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्: https://...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 18.09.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 20.09.2018
Stephan Sconyers भन्छन्:
अक्टोबर 17, 2018 मा 5:43 PM